Ianaro Amin’ny Alàlan’ireto Fampiasa Peroviana Ireto Ireo Fiteny Amazôniana · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra Juan Arellano Nandika (en) i Teodora C. Hasegan, Gwenaëlle Lefeuvre, avylavitra
Voadika ny 26 Jolay 2016 12:35 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, English, Français, Ελληνικά, bahasa Indonesia, Español
Ny tanjona dia ny mba hahalasa ireny fampiasa ireny ho “fitaovana hitahirizana ny maha-izahay anay ara-kolontsaina ary ambonin'ny zavatra rehetra, mba hampianarana sy hanamafisana ireo teny amazôniana”. Pikantsary tamin'ny lahatsary fampahafantarana ireo fampiasa ary azo jerena etsy ambany.
Raha vao Amazônia no eritreretina, amin'ny ankapobeny dia sarinà ala mahavariana sy renirano midadasika be toa ranomasina no tonga ao an-tsaina. Raha mba mahafantatra kely momba ireo olana ao amin'ilay faritra, dia mety hisaina ny fanimbàna ala, ny fahantrana ary ny tolona ataon'ireo mponina indizena hiarovana ireo teniny sy ireo kolontsainy. Fa zara any raha eritreretina toy ny fieritreretana loharanonà teknolojia avo lenta. Kanefa, izany indrindra no miseho ao Iquitos, tanàna iray ao Amazôna.
Ny 20 Jona, ny Ivontoerana Fikarohana Ao Amazôna Peroviana (IIAP) dia nandefa fampiasa dimy ho an'ny finday sy tablety mampiasa Android mba hahafahan'ireo “ankizy eo anelanelan'ny telo sy dimy taona mahazo ireo fahalalàna fototra (tarehin-tsoratra, tarehimarika, biby, ny momba ny tena sns…) amin'ny alàlan'ny feo sy ny sary, amin'ireo fiteny amazôniana tikuna, kandozi, quechua de Lamas, huitoto murui bue ary kukama-kukamiria.”
Araka izay hazavain'ilay lahatsary, natao ho an'ny ankizy ireny fampiasa ireny mba hianaran'izy ireo ny teniny, hiantohana ny fitahirizana azy io, farafahakeliny ho anà andian-taranaka iray hafa.
Zava-dehibe ny anamarihana fa betsaka amin'ireo telo amby efapolo fiteny fantatra ao Amazôna no andalam-panjavonana.
Ankoatra ny fanairana ireo fiteny amazôniana, ny fampivoarana ny teknolojian'ny fampitambaovao sy ny fifandraisana (TIC) koa dia afaka manatsara ny fiantohana ny fanjariana ara-tsakafo, ny fidirana amin'ny tolotra momba ny fahasalamana, ny fanabeazana, ny fisorohana ny loza voajanahary sy ny fanarahana maso ny tontolo iainana ao amin'ny faritra Amazôna Peroviana.
Na izany aza, mety tsy hisy ny fivoarana amin'io sehatra io raha tsy eo ny fanohanana matanjaka avy amin'ireo andrim-panjakana samihafa isam-paritra sy nasionaly.
Ny IIAP no mitarika ity hetsika fitahirizana ity, amin'ny alàlan'ilay tetikasa SITEC an'ny fandaharanasa Bioinfo, iarahany amin'ny Fakiolten'ny Siansan'ny Informatika ao amin'ny Anjerimanontolom-pirenena ao Amazôna Peroviana(UNAP). Isaac Ocampo Yahuarcani (IOY), injeniera iray fantatra amin'ireo bilaoginy sy ny hetsika ataony ety anaty tambajotra sosialy, ary ny fandrafetana rafitra fampahalalambaovao ao an-tanànan'i Iquitos, no hery manodina ao ambadik'io tetikasa io.
Nifandray tamin'i Ocampo ny Global Voices (GV) mba hahalala bebe kokoa momba ireo fampiasa fianarana ny fiteny amazôniana ireo.
GV : Tafiditra anaty ezaka iray goavana be ataon'ny IIAP ve ireny fampiasa ireny, sa hetsika avy amin'ny tarika tarihanao ihany?
IOY : Tetikasa ampiroboroboin'ny IIAP io ary ny tanjonay dia ny hampiditra ireo fiteny amazôniana rehetra ao Pero (telo amby efapolo ny fitambarany ofisialy) manomboka eto ka hatramin'ny Jolay 2021. Nanao fikarohana vitsivitsy aho ary nahatsapa fa tsy misy na iray aza fitaovana niomerika natao hampianarana amin'ireo fiteny amazôniana. Eo amin'ny fakiolte folo eo no misy aty amin'ny faritra amazôniana, ary fitopolo hafa any amin'ny faritra sisa aty Pero.
Hatreto, tsy manana famatsiana vola hafa izahay, fa tianay hoporofoina fa betsaka ny zavatra azo tanterahana rehefa misy ny fahavononana.
Ny lasitra fampandrosoana natolotra dia manipika fa ny fanatsofohana ara-tsosialy tena izy dia miainga ao anatin'ny fanoloran-tànan'ireo sampandraharaha maro samihafa (fahasalamana, fidirana amin'ny tsena, ny fitantànana mampiasa any antsoina ho “e-gouvernement”) ao anatin'ireo vondrom-piarahamonina amazôniana eto Pero. Hatramin'izao, ny natolotry ny sivilizasionantsika ho azy ireo dia voafetra ho amin'ny fandotoana sy ny fanapoizinana ny tanin'izy ireo. Ndeha ho ampiasaintsika ny tambajotra fampitambaovao sy ny fitsofohana tsy mitsaha-mitombo amin'ny fampiasàna finday. Ohatra, any amin'ireo vondrom-piarahamonina ao Manacamiri (ny fiteny kukama), Padrecocha (kukama) ary Centro Arenal (ny fiteny huitoto), ankohonana enina amin'ny folo no manana finday (indraindray mihoatra ny iray monja). Telo amin'izy ireo no manana smartphones afaka miditra amin'ny aterineto.
GV : Fotoana toy inona no lany namokarana ireo fampiasa ireo, ary ahoana no fomba namoronana ilay tarika mpamorona azy ?
IOY : Ny voalohany (huitoto) nandaniana volana efatra, ireo telo hafa nandaniana volana iray avy.
Izaho no niandohan'ireo taratasy fisoratana, ny rafitra ary ny endrika hafa rehetra. Raha ny marina dia izaho no mpanatontosa. Ndeha holazaintsika hoe izaho no tompon'ny hevitra sy ny fampiasàna azy. Avy eo, misy an'i Rodolfo Cardenas, injeniera momba ny rafikajy no sady mpamokatra lalao an-dahatsary. Ary avy eo, misy andianà mpianatra : Franz Chuje, Lelis Saravia ary Lina Vasquez, izay misahana ny famadihana azy ho niomerika, ny feo ary ny sary. Misy ihany koa ny andiany avy amin'ireo tompon'ny teny : Zoila Ochoa (huitoto), Maria Cuje ary Toribio Amasifuen (quechua). Miresaka momba ireo tompon'ny teny hafa ihany koa ilay lahatsary.
GV : Antenainareo ho tena liana amin'io ve ny vahoaka eo an-toerana, fa tsy ho ireo avy amin'ny anjerimanontolo ihany ?
IOY : Antenainay hivoatra ny fahalinana, saingy zava-dehibe io tetikasa io ho an'ny tarika miaraka amiko, mba hametrahana fomba izay hahazoan'ny vahoaka tombony amin'ny alàlan'ny fifandraisandavitra sy ny vontoatiny. Tianay ny hitondra ireo teknika fiompian'ny IIAP trondro ho an'ny amin'ireo vahoaka indizena, tianay ry zareo mba hahita tombony amin'ny fampiasana ny finday. Efa voaporofo fa manatsara ny lentam-piainan'ny vahoaka ny fivoaran'ny fifandraisandavitra, ary tianay mba hahazo amin'izany ny anay.
Asa fikarohana no asa ataon'ny IIAP, ary ny vokany dia angamba ho entina mampivoatra ho maoderina ny rafitra fanabeazana ampiasàna fiteny roa, hampifandraisana ireny vahoaka ireny amin'ny tsena, mba hahafahan'izy ireo miditra amin'ireo tolotra momba ny fitsaràna sy ny fifandraisana amin'ny governemanta, amin'ny fitenin'izy ireo ihany. Raha bangoina, hetsika iray io tetikasa io mba hisian'ny fampandrosoana – maharitra – ny vahoaka, amin'ny alàlan'ny TIC.
kukama iray, mpampianatra, mandrakitra ny feony ho ampiasaina any anatin'ireo fampiasa. Sary natolotr'i Isaac Ocampo / IIAP.
Kihon-dàlana iray tsy azo amaivanina araka izany no noraisin'ny tolona ho fitahirizana ireo fiteny amazôniana sy ny fampiroboroboana ireo fahafehezana ny TIC ao Iquitos, na mbola ho lavitra aza ny làlana hodiavina.
Afaka trohana amin'ireto rohy eto ambany ireto ireny fampiasa ireny :